Kedu esi emepụta backlinks dofollow n'ụzọ ziri ezi?
Backlinks dị oké mkpa maka azụmahịa ọ bụla. Webmasters na-echegbu onwe ha iji nweta backlinks na ibe weebụ ha n'ihi na o nwere ike inye aka na mgbalị SEO ma bulie ebe nrụọrụ weebụ. N'okwu a nke nhazi Google ranking ikpeazụ, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-atụ ụjọ imepụta backlinks dị ala dịka o nwere ike ime ka ndetu dochie na ntinye aka Google ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ndị nchịkọta weebụ niile na-achọ isi ụlọ weebụ PR dị elu iji wuo backlinks na ha. Ọnụ ọgụgụ nke ebe nrụọrụ weebụ dị ikikere dị oke, ọ na-esikwa ike inweta ohere njikọ ụlọ na ha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ka ụlọ ọrụ gị guzosie mmekọrịta mmekọrịta na ụlọ ọrụ PR dị elu, ọ bụghị ihe mere ị ga-eji tinye aka na ụlọ ọrụ spammy njikọ.Kama nke ahụ, ị ​​ga-achọ ụzọ ndị ọzọ dị egwu iji mee akwa backlinks PR. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otú e si enweta akara azụ site na saịtị PR10 na Wikipedia.
N'ime afọ ndị a, Wikipedia aghọwo nnukwu nsogbu maka ọtụtụ ndị ahịa ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume iweghara isi iyi a na Google. Otú ọ dị, onye ọkaibe a na-adịru mgbe ebighị ebi nwere ike iwetara uru maka azụmahịa gị n'ụdị àgwà na-abata. Wikipedia nwere ike iji ndị ahịa azụmahịa na-enyere aka na njikwa njikwa search ma na-enye aka na ozi nke ụwa kachasị muta akwụkwọ.
Ndị mmadụ na-aghọtahiekarị ọrụ nke backlinks na Wikipedia. Ọtụtụ n'ime ha na-eche na ọ bụ iji tinye njikọ ha na ngalaba "njikọ ndị ọzọ" ma ọ bụrụ na ọdịnaya dị mkpa na ụlọ ọrụ weebụ ha. Otú ọ dị, n'eziokwu, ọ dịghị emetụta ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere ụzọ amamihe iji gbakwunye gị backlinks na Wikipedia, ọ ga-ewetara gị ọtụtụ nti utịp. N'ụzọ dị iche, ọ nwere ike ịme ọtụtụ nsogbu, gụnyere ịnwe ngalaba agbakwunyere gị dị ka spam ma machibidoro na Wikipedia.
N'isiokwu a, m ga-eso gị rụọ ọrụ ụfọdụ kachasị mma na ndabere na Wikipedia. Ya mere, ọ bụrụ na emee ya n'ụzọ ziri ezi, ọ ka nwere ike ịba uru dị ukwuu na nchịkọta njikwa search engine gị.
Olee otú backlinks gbanwere na Wikipedia banyere afọ iri gara aga?
a malitere Wikipedia na 2001 dị ka nnukwu ebe nrụọrụ weebụ mmụta na ụwa. N'oge ahụ, azụ azụ azụ azụ na ndị ọzọ na-ejikọta njikọ ụlọ na-adịghị ewu ewu. Ọ bụ ya mere e ji kwe ka onye ọ bụla mepụta backlinks dofollow na Wikipedia. Otú ọ dị, site na ibu arọ nke Google nke Wikipedia na backlinks ya, webmasters dị ngwa na SEO utịp. Kemgbe ahụ, Wikipedia agbanweela àgwà nke ịmepụta backlinks dofollow na ibe ya. Iji gbochie mkpesa spam buru ibu na ntuziaka Google mebiri, Wikipedia na-enye ohere itinye nanị njikọ njikọ nke anaghị ebunye ihe ọ bụla njikọ njikọ. Ọzọkwa, Wikipedia na-emepụta listi azụ na nzube iji gbochie ngalaba ha weere dị ka spam.
Ọ bụ ezie na backlinks ocheollow enwechaghị mmetụta na SEO karịa ndị dofollow, akwụkwọ ntanetịaka Wikipedia ka bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị achọ na ahịa dijitalụ. Akwukwo PageRank nwere ike ighota ya na isi okwu nke Google na njikọ sitere na isi iyi a Source .